သွေးတိုးရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
သွေးလွှတ်ကြောများထဲတွင် ဖိအားများနေသော မကူးစက်နိုင်သည့် ရောဂါ
သွေးတိုး ရောဂါသည်လေဖြတ်ရောဂါ (Stroke) ဖြစ်စေသည့် နံပါတ်တစ် အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပြီး နှလုံးရောဂါ (နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်းခြင်း/ သွေးကြော ပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးကြီးခြင်း) ဖြစ်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝန်း လူသန်းပေါင်း တစ်ထောင်၌ 'သွေးတိုးရောဂါ' ခံစား နေကြရပြီး (၂၀၁၀)၌ သွေးတိုးရောဂါသည် ကမ္ဘာအနှံ့စုစုပေါင်းသေဆုံးခြင်း၏ (၁၈%)ရှိကာ အရေအတွက်အားဖြင့် လူပေါင်း ၉.၄သန်းခန့်သေဆုံးရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ယူဆကြသည်။ ကျွမ်းကျင်ဆေးပညာရှင်များက သွေးတိုးရောဂါကို တိတ်တဆိတ်လူသတ်သမား (Silent Killer) ဟုပင် တင်စား ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
အလိုအလျှောက်လက်မောင်း၌တိုင်းတာသော သွေးချိန်ကိရိယာ၊ အပေါ်သွေး 158 mmHg နှင့် အောက်သွေး 99 mmHg၊ နှလုံးခုံနှုန်း တစ်မိနစ် ၈၀ကြိမ်ကို ပြသနေခြင်း။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးညှစ်အား လျော့နည်းလာခြင်း (heart failure), peripheral arterial disease, အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှု(dementia) 
အများအားဖြင့် နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် မျိုးရိုးဗီဇအချက်လက်များ  
ဆားဓာတ်အလွန်အမင်းများပြားခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်သုံးခြင်း
၁ သွေးတိုးရောဂါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
၂ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ
၃ သွေးတိုးရောဂါ လက္ခဏာများ
၄ သွေးတိုးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ
၅ ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
သွေးတိုးရောဂါဆိုသည်မှာ ဆေးခန်းတွင်ချိန်သောအပေါ်သွေးပေါင်ချိန်သည် ၁၄၀နှင့်အထက် (သို့မဟုတ်) အောက်သွေးပေါင်ချိန် သည် ၉၀နှင့်အထက် ရှိလျှင် သွေးတိုးရောဂါ ဟုသတ်မှတ်သည်။
သို့ရာတွင် သွေးတိုးရောဂါဟု အမည်တပ်ရန် ၃လအတွင်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ခြားကာ ၂ ကြိမ် သွေးပေါင်တက်လျှင် သွေးတိုးရောဂါဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယခင် သွေးတိုးရောဂါ မရှိဘဲ ပထမဆုံးအကြိမ် သွေးပေါင်တက်ရုံဖြင့် သွေးတိုးသည်ဟု မခေါ်နိုင်ချေ။
သွေးဖိအားကို မီလီမီတာ မာကျူရီ ယူနစ်ဖြင့် တိုင်းတာပြီး နှလုံးကြွက်သား ညှစ်ထုတ်စဉ် သွေးကြောအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဖိအားကို အပေါ်သွေး (Systolic Blood Pressure) ဟု ခေါ်ပြီး၊ နှလုံးကြွက်သား မူလအတိုင်း ပြန်ဆန့်စဉ် ဖြစ်ပေါ်သော ဖိအားကို အောက်သွေး (Diastolic Blood Pressure) ဟုခေါ်သည်။ သွေးတိုးရောဂါ ရှိမရှိကို နားလည် တတ်ကျွမ်းသော ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများဖြင့် အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အစားအသောက် အနေအထိုင် ပြုပြင်၍ ဆေးဝါး စနစ်တကျ သုံးစွဲပါက ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ "The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure" (JNC7) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သွေးတိုးရောဂါကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည်။
အသက် (၁၈)နှစ် နှင့် အထက် လူကြီး
ပုံမှန် (Normal) အပေါ်သွေး (Systolic BP in mmHg)၁၂ဝ အောက် (နှင့်) အောက်သွေး (Diastolic BP in mmHg) ၈ဝ အောက်
ပုံမှန်ထက် မြင့်မားပြီး သွေးတိုး မဟုတ်သည့် အခြေအနေ (Prehypertension) အပေါ်သွေး ၁၂ဝ မှ ၁၃၉ (သို့) အောက်သွေး ၈ဝ မှ ၈၉
အဆင့်(၁) သွေးတိုး (Stage-1, Hypertension) အပေါ်သွေး ၁၄ဝ မှ ၁၅၉ (သို့) အောက်သွေး ၉ဝ မှ ၉၉
အဆင့်(၂) သွေးတိုး (Stage-2, Hypertension) အပေါ်သွေး ၁၆ဝ နှင့် အထက် (သို့) အောက်သွေး ၁၀ဝ နှင့် အထက်
သွေးတိုးရောဂါရှိသူ ၉၀ မှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အကြောင်းရင်းတိတိကျကျ မသိကြပဲ ကျန် ၅ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောဂါ တမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တွင်းရောဂါများမှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးကြောမကြီးရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အထွက်လွန်ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ သွေးတိုးစေသောဆေးများ သုံးစွဲနေခြင်းနှင့် အရက်သောက်သုံးခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ သွေးဖိအား 115/75 mmHg ကို ပုံမှန်ထား၍ အပေါ်သွေး 20 (or) အောက်သွေး 10 mmHg စီ တိုးတိုင်း နှလုံးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ (Cardiovascular Disease Risk) နှစ်ဆ စီ တိုးလာပါတယ်.. အမေရိကန် နိုင်ငံ National Health and Nutrition Examination Surveys ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုနှစ် စစ်တမ်းမှ အချက် အလက်များကို ထုတ်နုတ် တင်ပြရလှျင်
အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက် အမေရိကန်များ၏ ၂၉% မှာ သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရပြီး အသက်အရွယ် ကြီးလာသည်နှင့် အမှျ ဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားနေပါတယ်.. ၎င်းတို့ထဲတွင် ရ% မှာ အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၃၉ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပြီး၊ ၆၇% မှာ အသက် ၆ဝ နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ပါတယ်..
အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက် အမေရိကန်များ၏ ၃၇% မှာ ပုံမှန်ထက် သွေးဖိအား မြင့်မားနေပြီး (Prehypertension) ၃၀% မှာ ၁၈နှစ် မှ ၃၉ နှစ် အတွင်း ဖြစ်ပြီး ၃၈% မှာ ၆ဝနှစ် နှင့် အထက် ဖြစ်ပါတယ်..
သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ခန့်မှာ မိမိတွင် သွေးတိုးရောဂါ ရှိမှန်း မသိကြသူများ ဖြစ်နေပါတယ်.. များသောအားဖြင့် သွေးတိုး လက္ခဏာ မခံစားရသူ၊ ဘာလက္ခဏာမှ မပြသူ များပါတယ်.. ခံစားရသူ အချို့တွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူ မြန်လာခြင်း၊ အမြင် ဝေဝါးလာခြင်း တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်.. အချို့မှာ ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး လက္ခဏာ (Complications) များဖြင့် ပြတတ်ကြပါတယ်.. ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်းခြင်း)၊ လေဖြတ်ခြင်း (ဦးနှောက် သွေးကြော ပိတ်ခြင်း/ ပေါက်ခြင်း)၊ မော၍ ဖောယောင်ခြင်း (နှလုံး ညှစ်အား နည်းခြင်း- Heart Failure)၊ မျက်နှာ ယောင်အမ်း လာခြင်း (ကျောက်ကပ် ပျက်စီးခြင်း-Renal Failure)၊ မျက်စိ အမြင် ချို့ယွင်းလာခြင်း (Hypertensive Retinopathy) တို့ ဖြင့် လက္ခဏာ ပြတတ် ကြပါတယ်..
သွေးတိုးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများပြင်ဆင်
သွေးတိုး ရောဂါကြောင့် နှလုံးသွေးကြောများ ထူအမ်း မာကျောလာပြီး (Atherosclerosis) နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်းခြင်း/ ပိတ်ခြင်း (Heart Attack)၊ နှလုံးကြွက်သားများ ထူထဲလာပြီး (LVH) နှလုံးညှစ်အား လျော့နည်းလာခြင်း (Heart Failure) တို့ ဖြစ်ပေါ်လာ တတ်ပါတယ်..
ဦးနှောက် သွေးကြော ပိတ်ခြင်း (Ischemia)၊ သွေးကြော ပေါက်ခြင်း (Hemorrhage) တို့ဖြစ်ပေါ် စေပြီး လေဖြတ်ရောဂါ (Stroke) ဖြစ်ပေါ်လာ တတ်ပါတယ်..
သွေးတိုးရောဂါ တာရှည်လာပါက ကျောက်ကပ် ပျက်စီးပြီး (Nephrosclerosis) ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်း ယိုယွင်းခြင်း (Renal Failure) ဖြစ်ပေါ် လာတတ် ပါတယ်
မျက်စိတွင်းရှိ မြင်လွှာ (Retina) သွေးကြောများ ထိခိုက် ပျက်စီးပြီး အမြင်အာရုံ (Hypertensive Retinopathy) ထိခိုက်လာ တတ်ပါတယ်..
ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများပြင်ဆင်
JNC7 မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူများသည် သွေးဖိအားကို 140/90 mmHg အောက် နှင့် ဆီးချို၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ ရှိသူများ အနေဖြင့် 130/80 mmHg အောက် ရှိနေစေရန် ညွှန်ကြား ထားပါတယ်.. သွေးတိုး ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အောက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာ သင့်ပါတယ်..
ကိုယ်အလေးချိန် အဝ မလွန်စေရန် ထိန်းသိမ်း ထားရမည်.. Body Mass Index (BMI) ကို ၁၈.၅ မှ ၂၄.၅ အတွင်း ရှိနေစေရန် ထိန်းထားရမည်..
လမ်းမြန်မြန် လျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း ကဲ့သို့သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း ကို ပုံမှန် တစ်နေ့ မိနစ် ၃ဝ နှင့် တစ်ပတ်လျှင် ၅ရက်မှ ၇ရက်လုပ်ရမည်။
Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Plan အရ သစ်သီး ဝလံများ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ၊ အဆီ ထုတ်ထားသော နို့နှင့် နို့ထွက် ပစ္စည်းများကို များစွာ စားသုံးပါ.. ဆား (ဆိုဒီယမ်) နည်းသော အစာများကို ရွေးချယ် စားသုံးပါ.. အထားခံသော အစာများ (Preserved Food)၊ ပြုပြင်ထားသော အစာများ (Processed Food) သည် ဆားပါဝင်မှု များပြား ပါတယ်.. ငါးများ၊ အဆီမပါသော အသားများကို စားသုံးပါ.. ကိုလက်စထရော များသော အဆီ၊ အဆိမ့်၊ အချိုများကို ရှောင်ပါ..
အရက် အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းသည် သွေးတိုး စေတတ်သဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ..
သွေးတိုးရောဂါ အတွက် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော သွေးကျဆေးများကို တိတိကျကျ သုံးစွဲရမည်..
အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စက်များကို ဝယ်ယူရာတွင် အရည်အသွေးတရားဝင်စစ်ဆေးထားသော စက်များကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူရမည်။ www.stridebp.org တွင်စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်။ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းရာတွင် တပတ်လျှင် ၃ ရက် မှ ၇ ရက် တိုင်းတာနိုင်သည်။ မနက် နှင့် ညနေ တနေ့လျှင် ၂ကြိမ် ဆေးမသောက်မီ တိုင်းရမည်။ တိုင်းတာသည့်အခါတိုင်း ၅ မိနစ်နားပြီးလျှင် တစ်မိနစ်ခြား ၂ ကြိမ်တိုင်းတာ မှတ်သားထားရမည်။ ပထမဆုံးရက်တိုင်းတာခြင်းများကို ဖယ်၍ နောက်ရက်များ၏ ပျမ်းမျှသည် ၁၃၅/၈၅ နှင့်အထက်ဖြစ်လျှင် သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နောင်သွေးပေါင်ချိန် ကောင်းမွန်လာပါက တစ်ပတ်လျှင် (သို့မဟုတ်) တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) နှစ်ကြိမ်ခန့် တိုင်းတာလျှင် လုံလောက်ပြီဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်သွေးပေါင်ချိန်ခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်အထက် နှင့် အဆင့် ၁ သွေးတိုးရောဂါတို့အား သေချာစေရန် အကူအညီဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် White coat hypertension နှင့် Masked hypertension တို့တွင် အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်ခြင်းဖြင့် တိတိကျကျခွဲခြားကုသနိုင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ High Blood Pressure Fact Sheet (February 19, 2015)။
↑ "Global burden of cardiovascular disease and stroke: hypertension at the core" (May 2015). The Canadian Journal of Cardiology 31 (5): 569–71. doi:10.1016/j.cjca.2015.01.009. PMID 25795106.
↑ Mendis S၊ Puska P၊ Norrving B (2011)။ Global atlas on cardiovascular disease prevention and control (PDF) (1st ed.)။ Geneva: World Health Organization in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke Organization။ p. 38။ ISBN 9789241564373။ 17 ဩဂုတ် 2014 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။
↑ "Treatment options and considerations for hypertensive patients to prevent dementia" (July 2017). Expert Opinion on Pharmacotherapy 18 (10): 989–1000. doi:10.1080/14656566.2017.1333599. PMID 28532183.
↑ "Modifiable Risk Factors and Atrial Fibrillation" (August 2017). Circulation 136 (6): 583–596. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023163. PMID 28784826.
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ "Hypertension" (August 2015). Lancet 386 (9995): 801–12. doi:10.1016/s0140-6736(14)61468-9. PMID 25832858.
↑ "Essential hypertension. Part I: definition and etiology" (January 2000). Circulation 101 (3): 329–35. doi:10.1161/01.CIR.101.3.329. PMID 10645931.
↑ How Is High Blood Pressure Treated? (September 10, 2015)။
↑ ၉.၀ ၉.၁ "Using the Global Burden of Disease study to assist development of nation-specific fact sheets to promote prevention and control of hypertension and reduction in dietary salt:aresource from the World Hypertension League" (March 2015). Journal of Clinical Hypertension 17 (3): 165–7. doi:10.1111/jch.12479. PMID 25644474.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သွေးတိုးရောဂါ&oldid=567596" မှ ရယူရန်
၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။